ပျို့အန်ခြင်းအတွက်သဘာဝနည်းလမ်းများ - Hello Sayarwon
Hello Sayarwon » အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး » ပျို့အန်ခြင်းအတွက်သဘာဝနည်းလမ်းများ
မအီမသာဖြစ်​ခြင်းက ကင်​ဆာနဲ့ တိုက်​ပွဲ ဝင်​​နေရသူ​တွေ၊ အထူးသဖြင့်​ သားအိမ်​​ခေါင်းကင်​ဆာ ရှိတဲ့သူ​တွေမှာ အဖြစ်​များပါတယ်​။ တချို့ ကုသနည်း​တွေရဲ့ ​ဘေးထွက်​ဆိုးကျိုး​ကြောင့်​ ဒါမှမဟုတ်​ ကင်​ဆာ ကိုယ်​တိုင်​​ကြောင့်​လည်း ဖြစ်ပါတယ်​။ သင့်​အ​နေနဲ့ ​ဆေး​တွေကို အသုံးပြုပြီး မအီမသာဖြစ်​ခြင်းကို သက်​သာ​အောင်​ ပြုလုပ်​နိုင်​သလို သဘာဝ နည်း​တွေကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်​ပါတယ်​။
ဂျင်းက မအီမသာဖြစ်​ခြင်းကို သက်​သာ​အောင်​ လုပ်​ရာမှာ ပထမအဆင့်​ဝင်​ ဆိုတာ အံ့သြစရာ မရှိပါဘူး။ ဂျင်းက ဗိုက်ထဲမှာ အစာ​ခြေရည်​ မျိုးစုံ၊ အင်​ဇိုင်းမျိုးစုံကို စစ်​ထုတ်အောင်​ လှုံ့ဆော်​​ပေးပြီး အစာအိမ်​အက်​ဆစ်​ကို ဓာတ်​ပြုစေပါတယ်​။ ဂျင်းမှာပါတဲ့ phenols ​တွေက အစာအိမ်​ တစ်​သျှူးတွေ ထကြွမှုကို သက်​သာ​စေတဲ့ ငြိမ်​​ဆေးလို့​ပြောလို့ရပါတယ်​။
ဒီ phenols ​တွေက အစာ​ခြေမှုကို ပိုမို​ကောင်းမွန်​​စေပြီး ကိုယ်​ထဲက အဆိပ်​​တွေကိုလည်း မြန်​မြန်​စွန့်​တတ်​​စေတဲ့အတွက်​ သင့်​ကို​ နေလို့​ကောင်း​စေပါတယ်​။ သင့်​အ​နေနဲ့ ဂျင်းကို ဘယ်​လိုပုံစံဖြစ်​ဖြစ်​ သုံးနိုင်​ပါတယ်​။ ​ဆေးလုံးနဲ့ပဲ ဖြစ်​ဖြစ်၊ အစိမ်းအတိုင်းပဲ ဖြစ်​ဖြစ်​၊ အစားအစာ​တွေမှာ ဟင်းခတ်​မှုန့်​ အဖြစ်​ပဲ ဖြစ်​ဖြစ်​ သုံးနိုင်​ပါတယ်​။ ဒါမှမဟုတ်​ ဂျင်း လက်​ဖက်​ရည်​​ သောက်​ခြင်း၊ ဂျင်းသကြားလုံး စားခြင်းတို့ကလည်း မအီမသာဖြစ်​မှုကို သက်သာ​စေပါမယ်​။
Acupressure (နှိပ်​နယ်​ခြင်း တစ်​မျိုး)
Acupressure က ရိုးရာ​ဆေးပညာ နည်းလမ်းတစ်​မျိုး ဖြစ်ပြီး လူ့ကိုယ်​ရဲ့ ​နေရာတချို့ကို နှိပ်​နယ်​​ပေးတဲ့ ပညာ ဖြစ်ပါတယ်​။ ဒီနည်းလမ်းက ​ရောဂါလက္ခဏာ​ တော်​​တော်​များများကို သက်​သာ​စေပြီး မအီမသာ ဖြစ်​ခြင်းလည်း ပါဝင်ပါတယ်​။ ​လေ့လာမှု​တွေအရာ သင့်​ကိုယ်​က ဖိအား​နေရာ​တွေကို ဖိနှိပ်​​ပေးခြင်းက neurotransmitters ​တွေကို ထုတ်​လွှတ်​​ပေးမှာပါ။ သူတို့က ​ဘေးဖြစ်​​စေတဲ့ ဓာတုပစ္စည်း​တွေကို ပိတ်​ဆို့​ပေးတဲ့ serotonin ဒါမှမဟုတ်​ endorphins ​တွေပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​။
အစားအ​သောက်​ ကျွမ်းကျင်​သူ​တွေက သင့်​အ​နေနဲ့ အစားအစာ​တွေကို နည်းနည်းချင်း ခွဲပြီး အကြိမ်​များများ စားခြင်းက အစာအိမ်​ အလုပ်​လုပ်​တာ ပို​ကောင်း​စေသလို မအီမသာ ဖြစ်​ခြင်းကို ကာကွယ်​​ပေးပါတယ်​။ အစာအိမ်​ထဲမှာ ဘာမှ မရှိတာက မအီမသာ ဖြစ်​​စေပါတယ်​။ တံတွေးနဲ့ အစာအိမ်​ရည်​​တွေ ထုတ်​လုပ်​မှု တိုး​စေတဲ့ တချို့ အဆာ​ပြေ အစားအစာ​တွေ၊ ဥပမာ – သကြားလုံး၊ ​ရှောက်ရည်​ ပါဝင်​တဲ့ အစက်​ချ​ဆေး​တွေက မအီမသာ ဖြစ်ခြင်းကို သက်​သာ​စေပါတယ်​။
ပူစီနံ (Peppermint) က မအီမသာဖြစ်​ခြင်းကို ကုသဖို့ ဟိုးအရင်​အချိန်​​တွေတုန်းက အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ရိုးရာ​ဆေးနည်းပါ။ ပူစီနံအရွက်​နဲ့ အဆီ​တွေက အစာမ​ကြေခြင်းနဲ့ ဗိုက်​ပွခြင်းကို ကုသ​ပေးပါတယ်​။ သူက အစာ​တွေကို အစာအိမ်​ဆီ မြန်​မြန်​​ရောက်​​အောင်​ ပို့​ပေးပြီး သင့်​ အစာအိမ်ကို ​ပြေ​လျော့​စေပါတယ်​။
ပူစီနံကို ​ဆေးလုံး၊ အဆီ ကြိုက်​တဲ့ပုံစံနဲ့ သုံးနိုင်​ပါတယ်​။ ပူစီနံက ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​ အမျိုးသမီး​တွေ အပါအဝင်​ လူအများစုနဲ့ တည့်​ပါတယ်​။ တကယ်​လို့ သင့်​မှာ gastroesophageal reflux disease (GERD) ရှိ​နေရင်​​တော့ သင်​ peppermint မသုံးသင့်​ပါဘူး။
​ခေါင်းမူးခြင်းနဲ့ မိုက်​ခနဲဖြစ်​ခြင်းက မအီမသာ ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါ​တွေက ​သွေးလည်​ပတ်​မှု​ ကြောင့်​ပါ။ တချို့ အ​နေအထား​တွေက မအီမသာဖြစ်​ခြင်းကို သက်​သာ​စေတဲ့အ​ကြောင်းက ​သွေးကို လိုအပ်​တဲ့​နေရာဆီ​ ရောက်အောင်​ ပို့​ပေးနိုင်​လို့ပါ။ တစ်​ချိန်​တည်းမှာပဲ ​သွေးလည်​ပတ်​မှုကို ထိန်းချုပ်​​ပေးခြင်းဖြင့်​ သင့်​ဦး​နှောက်​ကို ထိန်းညှိ​ပေးပါတယ်​။
​အောက်​မှာက သင့်​အတွက်​ အကြံ​ပေးချက်​​လေး​တွေပါ။
ညအိပ်​တဲ့အခါ ​မှောင်​မိုက်​ပြီး တိတ်​ဆိတ်​တဲ့ အခန်း ရှိတာ​ ကောင်းပါတယ်​။ ​ခေါင်းအုံး မပါဘဲ သင့်​​ခေါင်းကို တစ်​​ဖြောင့်​တည်း ထားအိပ်​ကြည့်​ပါ။ အသက်​ပုံ မှန်​ရှူပါ။
နံရံကို​ကျောမှီ ထိုင်​ပြီး ဒူး​ထောင်​ထားပါ။ ​ခေါင်းကို ဒူးကြားညှပ်​ပြီး အသက်​ရှူပါ။
Hello Health Groupသည် ဆေးပညာအကြံပြုချက်များ၊ ရောဂါရှာဖွေအတည်ပြုချက်များနှင့် ကုသမှုများ မပြုလုပ်ပေးပါ။
သားအိမ်တွင်းထည့် သန္ဓေတားပစ္စည်း ဆိုတာဘာလဲ
Natural Remedies for Nausea. http://www.everydayhealth.com/digestive-health/four-natural-remedies-for-nausea.aspx. Accessed December 10, 2016.
Soothing Remedies for Nausea & Morning Sickness. http://everydayroots.com/nausea-remedies. Accessed December 10, 2016.
Using natural remedies to treat cancer patients with nausea. http://www.cancercenter.com/discussions/blog/using-natural-remedies-to-treat-cancer-patients-with-nausea/